Indlu yaseFama ephuphayo eneJacuzzi, iGadi, iBBQ, iPool yokuQubha
Ifumaneka eGubbio, le fama itofotofo inamagumbi okulala ama-2 abantu abayi-6. Ifanelekile kubahlobo okanye kwiintsapho, iindwendwe zinokuphumla kwi-jacuzzi, zithathe idiphu kwi-swimming pool ekwabelwana ngayo kunye nokufikelela kwi-WiFi yamahhala kule propati yomntwana.
Ungandwendwela umbindi wedolophu, umgama oyi-1000 m kude, ukuthenga izinto eziqhelekileyo kunye nokuthenga. Ukuba unqwenela ukonwabela isidlo esimnandi kwi-cuisine yendawo, ungandwendwela iindawo zokutyela ezikumgama weekhilomitha ezi-2. Unokujonga kwakhona izixeko zaseTodi, Perugia, Assisi, Orvieto, kunye neSpoleto.
Iindwendwe zingonwabela ngexesha lazo lokuphumla ngomdlalo wentenetya yetafile ngelixa igadi entle imema ibarbecue ecaleni kwepoolside. Ikhitshi ixhotyiswe ngomatshini wekofu, i-oven kunye nefriji. Le propathi elungele abantwana ikwabonisa izixhobo zokudlala ngelixa ibhedi kunye nesitulo esiphezulu zifumaneka ngentlawulo encinci. Indawo yokufudumeza iyafumaneka nangentlawulo encinci.
Isikhululo seenqwelomoya esikufutshane sikumgama oziikhilomitha ezingama-45.
Uyilo: Umgangatho ophantsi: (Igumbi lokuhlala(ibhedi ephindwe kabini, iTV(isathelayithi)), ikhitshi elivulekileyo(umatshini wekofu(isihluzi), i-oveni,ifriji-isikhenkcezisi), igumbi lokulala(ibhedi ephindwe kabini), igumbi lokulala(2x ibhedi eyodwa), igumbi lokuhlambela( ishawa, isitya sokuhlambela, indlu yangasese, ibhidet))
jacuzzi(kwabelwane nezinye iindwendwe, ngaphandle, kuhlawulwe), igadi(kwabelwane ngayo nezinye iindwendwe, 6000 m2), BBQ, indawo yokupaka, indawo yokuqubha(kwabelwana ngayo nezinye iindwendwe, 14 x 6 m., ivulwe nge-1/2 kaMeyi upto kwaye ibandakanya Sep), izixhobo zokudlala, itafile yentenetya yetafile